Isikhululo sokuthunga esizenzekelayo
Bartack kunye nomzekelo wokuthunga
Iqhosha kunye neeperile zifakelwa
Umatshini okhethekileyo wokuthunga
Umatshini wokushicilela ubushushu
Umatshini oshushu wentengiso: umatshini ozenzekelayo owamkela ipokotho
Umsebenzi uza kuba yeyona ibiza kakhulu kwixa elizayo. Ukuzenzekelayo kusombulula iingxaki zemanyuwali, ngelixa ukwenziwa kwedijithali kusombulula iingxaki kulawulo. Imveliso ekrelekrele lolona khetho lufanelekileyo kwimizi-mveliso. Umatshini wethu wokukhawulela ipokotho ngokuzenzekelayo, izikhombisi ezi-4 ngaxeshanye ukusonga ipokotho, ukusonga kunye nokuthunga ...
Ithuba laser Umatshini epokothweni yokwamkela ngo-2021
Emva kokuba umatshini wokuthunga efumene "ukuzola" kunyaka ophelileyo, kulo nyaka imarike yazisa ukubuyela kwimeko yesiqhelo. Imiyalelo yefektri yethu iyaqhubeka nokwanda kwaye siyazi ngokucacileyo ukubuyela kwimeko yentengiso. Kwangelo xesha, unikezelo lwe spar esezantsi ...
UMsindisi wefektri yempahla: Zenzekelayo isantya seplocket setter
ngomphathi ku 20-12-30
I-TS-199 series setter setter sisantya esiphezulu somatshini wokuthunga oluzenzekelayo wokuthunga iingubo epokothweni. Oomatshini bokusetha epokothweni banokuchaneka okuphezulu kunye nomgangatho ozinzileyo. Xa kuthelekiswa nemveliso yemveli yesandla, ukusebenza kakuhle komsebenzi kwandiswe ngamaxesha angama-4-5. Nye...
Ihlabathi Kuqala: Umatshini wokuthunga oZenzekelayo weLaser Pocket
Ngaba usakhathazekile ngokungamfumani umsebenzi onobuchule? Ngaba usakhathazekile ngokunyuka kweendleko zabasebenzi? Ngaba ungxamile ukuba igqityiwe iodolo? Ngaba usakhathazwa bubunzima kunye nokucotha kokuthunga uziphu epokothweni? Inkampani yethu kutshanje d ...
ngomphathi ku 20-08-12
Inkampani yakhe isakhiwo esitsha sefektri kwaye yongeza i-20 enyibilikayo imigca yemveliso, kunye nemveliso yemihla ngemihla yeetoni ezili-15. Ngoku sineqela lezobuchwephesha elinamandla, sihlangabezana neemfuno zamazwe ahlukeneyo ngeendlela ezahlukeneyo zokusebenzisa imaski ngokweemfuno ezahlukeneyo zabathengi abahlukeneyo ...
Ilaphu elingalukwanga kunye nemveliso yelaphu enyibilikisiweyo
ngomphathi ku 20-07-08
Inkampani yethu isebenzisana ne Changying non-ephothiweyo ilaphu Co., Ltd ukwandisa imigca yemveliso. Ngoku imveliso yemihla ngemihla yengubo engalukwanga iitoni ezili-10, kwaye imveliso yelaphu elinyibilikisiweyo elithambileyo ziitoni ezi-3. Ngokungqongqo zihlolwe zonke izinto ekrwada, Umgangatho ojolise kwizinto ezisisiseko ukuya kwi-masterbatch.
ngomphathi ku 20-04-02
Ngexesha le-coronavirus eqatha e-China, inkampani yethu yafumana uqeqesho kurhulumente lokuba ivelise umatshini wemaski kunye neemaski. Inkampani yethu ikwacwangcise ngokukhawuleza abasebenzi bezobugcisa ukuba benze i-R & D kunye nemveliso. Iimaski esizivelisileyo ziye zafikelela kwelona nqanaba liphezulu kwi-indu ...
I-Topsew Izixhobo zokuthunga ezizenzekelayo Co., Ltd.
ngomphathi ku 20-02-20
Kude kube sekupheleni kuka-2019, sinomgca opheleleyo womatshini wokusetha ipokotho, umatshini wokuthunga ipateni, Umatshini wohlobo lokuthunga umatshini, uhlobo lomatshini wokuthunga uJuki, umtya weqhosha, umatshini wokufaka iperile, kunye nezinye iintlobo zoomatshini bokuthunga ngokuzenzekelayo. 1. Umatshini wokusetha epokothweni:
Embindini ka-Novemba, siye kuMmeli waseMelika kuQeqesho oluzenzekelayo lwePocket
Uqeqesho kubandakanya: 1. indlela yokwenza inkqubo. 2. Ungayiguqula njani inkqubo. 3.Ukutshintsha indlela yokubamba izinto kunye nokulungisa umatshini kwijean ipokotho, emva koko sibafundise indlela yokutshintsha i-clamp kunye nokuhlengahlengisa umatshini kwipokotho yehempe. Indlela yokusombulula ingxaki xa ...
Ekupheleni kuka-Novemba, 2019, Saya kwiFektri yoMthengi waseBangladesh ngokuQeqesha oMatshini oZenzekelayo.
Phambi kokuba basebenzise umatshini omnye wesinyithi epokothweni, kwaye emva koko umatshini osetwa ngokuzenzekelayo. Ngoku sebenzisa oomatshini bethu bokuzenzela abaseta ipokotho ngokuzenzekelayo, banokugcina umntu osebenza kunye nexesha. Igcisa loMthengi lifunda nzima kakhulu. Xa befunda, benza irekhodi. Iingcali zikrelekrele kakhulu. Emva kwesev ...
No.1 Yewang Road, Yexie town, isithili saseSongjiang, eShanghai, China